Ungayivulela njani i-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Epreli 27, 2021 0 IiCententarios 327
Njengoko itekhnoloji iqhubela phambili, ngokunjalo nobuchule besoftware kunye neqonga lewebhu. Ndiyabulela koku, iinkampani ezinkulu zonxibelelwano kwimidiya ziye zahluka kwaye zanda ngemisebenzi emitsha kunye namandla.
Oku kuvumele unxibelelwano kunye nokunxibelelana phakathi kwabasebenzisi abadityaniswe kwezi nethiwekhi ukuba ziphuculwe, kusetyenziswa izinto ezintsha zokusebenza kunye nezixhobo. Enye yazo kukukwazi ukushenxisa nawuphi na umkhondo umntu anayo kwiprofayile yakho kwaye ngokufanayo, ukufumana unxibelelwano lwabo.
Emva kokuvimba umsebenzisi kwi-Twitter, unokuba nomdla wokwazi ukuba bebesenza ntoni okanye besenza ntoni ngexesha lokuvalwa kwabo. Okanye ngokulula, ugqibe kwelokuba wandise iihorizons zakho, ukhule njengomntu kwaye ubanyamezele abanye abantu, nokuba bangathandeki kangakanani na.
Ukuvulela umsebenzisi ovaliweyo, landela nje la manyathelo:
Ngena kwi-twitter ngeyakho igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha
Khangela "useto kunye nemfihlo" kwicandelo lasekhohlo leprofayile yakho. Ukuba uqhagamshela kwi-PC, kuya kufuneka ungene kwi icon "ukhetho oluninzi". Ukuba ufikelela kwi-app ye-twitter, cinezela ifoto yeprofayile yakho kwi-interface ephambili, oku kuya kubonisa imenyu kunye nenketho.
Ukungena kweli candelo, kuya kufuneka ujonge icandelo "labucala kunye nokhuseleko" emva koko ufumane indawo "Thulisa kwaye uvimbe."
Kukhetho "isilumko kunye nebhlokhi", uya kufumana iinketho ezininzi ezizezi; ii-akhawunti ezivaliweyo, iiakhawunti ezithulisiweyo, amagama athulisiweyo, kunye nezaziso ezithulisiweyo.
Ngenisa ukhetho "lweakhawunti ezivaliweyo". Nje ukuba ungene, uluhlu lwabo bonke abasebenzisi obukhe wabathintela luya kuboniswa.
Ecaleni komsebenzisi ngamnye uya kubona i "icon" evaliweyo. Ngokucinezela kuyo, le lock iya kususwa. Uya kuba nakho ukufaka iprofayile yabo kwaye ujonge ukuba ibhlokhi isusiwe na.
Izenzo ngaphambi kokuvula.
Phambi kokuba wenze inkqubo iyavula, kwaye kwimeko apho ungaqinisekanga ukuba ufuna ngokwenene ukuvimba umsebenzisi, ungangena iprofayili yabo kwaye ubone iifayile zabo.
Kwiprofayili yakhe, ukhetho "jonga ii-tweets" luya kufumaneka kwaye uya kuba nakho ukufikelela kuzo zonke ii-tweets azipapashileyo.
Uyakukwazi ukubona iimpendulo zabo, iikhomenti, iifoto, iividiyo kunye nezinto abazithandayo, uhlala ucaciselwa nge-twitter ukuba lo msebenzisi uhlala evaliwe, ekufuneka usoloko uvaliwe cinezela "jonga ii-tweets" kwicandelo ngalinye leprofayili.
Ngaphambili bekunokwenzeka ukuba ungenise ngaphakathi okanye uthumele kwelinye ilizwe uluhlu lwabafowunelwa abavaliweyo kwifayile ye-csv kwiakhawunti yakho ye-twitter. Uya kufumana ukhetho "ukungenisa iibhloko" kwindawo efanayo yabantu abavalelweyo. Yithebhu ekwabelwana ngayo necandelo leeakhawunti ezivaliweyo.
Apha ungangenisa uluhlu lwabasebenzisi ofuna ukubathintela ngokuzenzekelayo. Nangona kunjalo, ngohlaziyo olutsha kwiqonga le-twitter, olu khetho alusafumaneki, ke uya kuba nakho ukubona uluhlu olwavinjiweyo ngelo xesha, kunye nethuba lokukhulula aba basebenzisi kwibhloko.
1 Ukuvulela umsebenzisi ovaliweyo, landela nje la manyathelo:
2 Izenzo ngaphambi kokuvula.
3 Ngenisa izitshixo
Uyenza njani izitikha kwiTelegram?